Klocki: usetyenziso olutsha lwephazili yeveki kwiVenkile ye App | IPhone iindaba
Klocki: usetyenziso olutsha lweveki kwiVenkile ye App
Ingelosi Gonzalez | | Izaziso, Ezahlukeneyo
Njengesiqhelo, veki nganye sikwazisa ukuba yeyiphi iapp okanye umdlalo ongaphakathi usetyenziso lweveki kwiVenkile yeApple. Izihloko zokugqibela ezazikweli candelo zazibekwe kumxholo weepuzzle, kunye neveki enye iipuzzle bayabuya kwivenkile yeapp . Eli xesha limalunga klocki, umdlalo owawunenxalenye yokuqala ebizwa umkhala Kwaye, nangona ingazange yamkelwe kakhulu eluntwini, uMaciej Targoni, umphuhlisi wayo, wakhupha ingxelo yesibini esinokonwabela simahla kule veki.
Enye insiza yephazili yeveki: klocki
Nge-App yasimahla yeveki sikuzisa i-app entle ukuze uyonwabele ngaphandle kwentlawulo kule veki (ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo kuthengiswa ngokwahlukeneyo). Khawufane ucinge ityhubhu kaRubik enomfanekiso opeyintiweyo kubuso bobuso bayo: vala amehlo akho, ungcolise ityhubhu, uze uzame ukuphinda wenze amanani. Le yile iphazili encinci eqala ngaphandle kokuqhubeka, ngaphandle kwemiyalelo okanye kwikhawuntara yamanqaku. Umceli mngeni kubukrelekrele bakho kunye nolonwabo kwiimpawu zakho, ngenxa yomculo opholileyo kunye nemibala ye-pastel.
El Iqela labahleli Ukusuka kwiVenkile ye App ifuna ukuqaqambisa izinto ezimbini ezinomdla ze klocki. Ekuqaleni, umculo oquka wonke umdlalo Ngummangaliso, into ngokoluvo lwam yenye yezona zibaluleke kakhulu xa ukhetha umdlalo wolu hlobo. Kwaye kwelinye icala, ukufana kunye Ityhubhu kaRubik.
Kwaye eli candelo lingundoqo ekuqondeni ubucukubhede bomdlalo. Kuwo onke amanqanaba uthotho lwe izinto ezinamanani ngaphakathi, Kwaye injongo yethu kukuzicwangcisa ukuze zivakale. Nje ukuba siwugqibe umsebenzi, ulwakhiwo luya kukhanya kwaye umculo uya kutshintsha ukusilumkisa ukuba singahambela kwinqanaba elilandelayo.
Ukuba ufuna ukonwabela klocki, Ixabiso layo lalingama-0,99 euros, simahla, kuya kufuneka ungene kwiVenkile ye App okanye ungene kule khonkco ilandelayo kwaye uyikhuphele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Klocki: usetyenziso olutsha lweveki kwiVenkile ye App
I-Apple ilungiselela i-chip entsha enikezelwe kubuchwephesha bobugcisa
Isikhululo senqwelomoya saseGatwick sifaka iBeacons ukukhokela abasebenzisi